Kwiminyaka embalwa ngexesha nangemva kweMfazwe Yehlabathi II , wayenobunzima: inkunzi yomntu omkhulu, ekhangela udonga, ehamba kunye nombhalo othi "uKilroy wayelapha." Ekuphakameni kokuthandwa kwakhe, i-Kilroy inokufunyanwa kuyo yonke indawo: kwiindawo zokuhlambela kunye nakwiibhuloho, kwizikolo zokutya zeefestile nakwimisebenzi yasekhaya, kwiivenkile zeNavy kunye neefowuni ze-Air Force. I-classic Bugs Bunny kusukela ngowe-1948, "Haredevil Hare," ibonisa indlela uKilroy ayenayo ngayo inkolelo yep pop: ecinga ukuba ngumvundla wokuqala ukuba ahlale emhlabeni ngenyanga, izigulane aziqapheli isiqubulo esithi "uKilroy wayelapha" ngxondorha emva kwakhe.
I-Prehistory ye "Kilroy Yayilapha"
Uphi le meme- kwaye yintoni kanye kanye, kwakuneminyaka engama-50 ngaphambi kokuveliswa kwe-intanethi- "iKroroy wayelapha" evela? Ewe, igraffiti ngokwayo iye yajikeleza ngamawaka eminyaka, kodwa umdwebo waseLilroy ubonakala uvela kwigraffito efanayo, "uFoo wayelapha," owaziwayo kwi-servicemen yase-Australia ngexesha leMfazwe Yehlabathi I ; Oku kwakukubonakaliswa kwesimboli esikhulu somdwebo okhangelelwa eludongeni, kodwa asizange sihambisane namagama.
Ngexesha elifanayo uKilroy wayevela ezindaweni ezingalindelekanga eU.S., enye inkunkuma, "Mnu Chad," yayibonakala eNgilandi. Ikhodi ye-Chad inokuvela kwisibonakaliso sesiGrike ku-Omega, okanye mhlawumbi kube yinto elula yokwenza umzobo wesiphaluka; nawuphi na umcimbi, wathwala omnye "umntu ukhangele" igama njengeL Kilroy. Ngexesha elifutshane ngaphambi kokuba kuqhambuka iMfazwe Yehlabathi II, kubonakala sengathi, uFoo, u-Chad kunye no-Kilroy badibanisa iDNA yabo yesigxina kwaye bahanjiswa kwi-classic "Kilroy wayelapha."
Uphi "i-Kilroy" evela kuyo?
Ngokuphathelele ukufumana igama elithi "Kilroy," loo mbambano. Ezinye izazi-mlando zibhekisela kuJames J. Kilroy, umhloli kwi-River River Shipyard yaseBraintree, MA, ocinga ukuba ubhala "uKilro wayelapha" kwiindawo ezahlukeneyo zeenqanawa njengoko zakhiwa (emva kokuba iinqanawa zagqitywa, le mibhalo yayiza bekungenakufikeleleka, ngoko ke igama elithi "Kilroy" lokufumana indawo engenakwenzekayo yokufikelela kuyo).
Omnye umviwa nguFrancis J. Kilroy, Jr., ijoni eFlorida, ogula ngumkhuhlane, obhala "uKilroy uya kuba ngeveki elandelayo" eludongeni lweenqaba zakhe; kubeni eli bali libonakala kuphela ngo-1945, nangona kunjalo, kubonakala kungenakwenzeka ukuba uFrancis, kunokuba uYakobi, wayengumthombo we-Kilroy legend. (Kakade, kunokwenzeka ukuba uYakobi noFrancis Kilroy babandakanyeka naluphi na uhlobo, kwaye igama elithi "Kilroy" lalingeniswa kwi-GI ekhuseleyo)
Kule ngongoma, sifanele sibheke "i-documentary" ka-2007, i- Fort Knox: Iimfihlakalo eziye zavezwa , ezenzeke ngo-2007 kwiSitulo seMbali. Isiseko salo mboniso kukuba i-Fort Knox ilayishwe ngegolide ngo-1937, kodwa yenziwa kuphela kufinyeleleka kuluntu ngo-1970-ngaloo ndlela abavelisi kwiMbali yeMbali babengenakunxalenye yecala leenqaba kunye nokutyelela i-capsule yexesha eliphambi kwemfazwe EMelika. Kuxwebhu olubhaliweyo, "i-Kilroy elapha" ibonakala ibhaliwe eludongeni ngaphakathi kwidonga, okuya kuthetha ukuba imvelaphi yale meme ihamba phambi kweye-1937. Ngelishwa, kamva kwambonakaliswa ngenye yeengcebiso zababonisi ukuba umgca wecala "wawuvuselelwa" (okt, owenziwe ngokupheleleyo), omele ukwenze ucinge kabini malunga nokuchaneka kwembali yento echazwe kulo mzila wekhebula!
"U-Kilroy Wayekho" Uya Ekulweni
Iminyaka emine yeMfazwe Yehlabathi II yayisisigxina, esinobungozi, kwaye sisoloko sinesizungu kubantu baseMelika, ababefuna nayiphi na indlela yokuzonwabisa abayifumanayo. Ngaloo nto, "uKilroy wayelapha" usebenza njengesixhasayo sokuziphatha-xa amajoni ase-US afika e-beachhead, bahlala bebona le meme ibhalwe eludongeni okanye ucingo olukufuphi, mhlawumbi ityalwe khona ngethuba lokuthobela phambili. Njengoko imfazwe yaqhubeka, "uKilroy wayelapha" waba ngumqondiso wokuzikhukhumeza, ephethe isigidimi sokuthi akukho ndawo, kwaye akukho lizwe, lalingenakukwazi ukufumana amandla aseMelika (kwaye ingakumbi ukuba "uKilroy wayelapha" kwenzeka kwicala lomngxube wangena ngaphakathi kwintsimi yintsha).
Ngomdla, noJosef Stalin noAdolf Hitler , ababini abalawulwa ngabakhohlisi abangaziwa ngenxa yabo yehlazo, banokuqonda ukuba "uKilroy ulapha." I-stalin evulekileyo yaxelwa ukuba yayingenakunqanyulwa xa yayicacisa "i-Kilroy ilapha" igraffito kwindawo yokuhlambela kwintlanganiso yasePotsdam eJamani; mhlawumbi wayala i-NKVD ukuba athole umntu ojongene naye kwaye amenze atshale.
Futhi "uKilroy wayelapha" yayibhalwe kwiimigaqo ezininzi zaseMelika ezifunyenwe ngamaJamani ukuba uHitler wazibuza ukuba uKilroy wayengumhloli wenhloli, ecaleni kwemizila yeJames Bond!
ULilroy uye waba nempilo emva kokufa. Umdala omdala akayi kumka; Baqhubeka besuka kwimeko yembali, ukwenzela ukuba umntu oneminyaka emithandathu ubudala ejonge "i-Adventure Time" okanye ufunde i-Peanuts umxube we-Peanuts ukusuka kuma-1970 uya kuqonda eli binzana, kodwa kungekhona kwimvelaphi yalo okanye ukuchazwa kwayo. Akunjalo nje kuphela ukuba "uKilroy wayelapha;" I-Kilroy isabikho phakathi kwethu, kwiincwadi zoonwabo, imidlalo yevidiyo, imibukiso yeTV, kunye nazo zonke iindidi ze-pop-culture.
Kuthetha ukuthini ixesha elithi 'iindidi ezinobungozi'?
Indlela Echolocation Works ngayo
UGidiyon v. Wainwright